ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ruhsar Pekcan သည်တူရကီ - ရုရှားအစိုးရနှင့်ပူးတွဲစီးပွားရေးကော်မရှင်၏ပူးတွဲဥက္ကchair္ဌနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းစွမ်းအင်ဝန်ကြီး Aleksandr Novak တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Pekcan သည် video conferencing နည်းဖြင့်ပြုလုပ်သောအစည်းအဝေးတွင်ကိုယ်စားလှယ်များလည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီး Adil Karaismailoğluသည် Ankara-Istanbul အမြန်ရထားလမ်းစီမံကိန်း T26 ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းနေရာတွင်အလုပ်လုပ်သောအလုပ်သမားများနှင့်အတူအပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Bilecik's Bozüyükခရိုင်ရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၌အလုပ်သမားများနှင့်အတူလာရောက်လုပ်ကိုင်သောKaraismailoğlu, ယခုနှစ်တွင်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
coronavirus (Kovid-19) ၏တူရကီရဲ့အသစ်အမျိုးအစားဟာကမ္ဘာ့အခွအေနေဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲအတွက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ တူရကီကမ္ဘာကြီးအမိန့်ဆန့်ကျင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများအောင်၏ဖြစ်ပွားပြီးနောက် reshaped မည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူကျန်းမာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ။ တူရကီတွင်ကျင်းပအစည်းအဝေးများ, [ပို ... ]
ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ruhsar Pekcan သည်နိုင်ငံသားများအားမတန်တဆစျေးနှုန်းများမြင့်တက်မှုမှကာကွယ်ရန်အတွက်ကာလသစ်အတွင်း၎င်းတို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တရားမ ၀ င်သောစျေးနှုန်းများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များ၌ Coronary Virus အသစ်များ
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီးဌာနသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ coronavirus အမျိုးအစားအသစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန် (Kovid-19) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌လုပ်ဆောင်ရန်လမ်းညွှန်ချက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးအထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှထုတ်ဝေသည့် ၁၉ ပုဒ်ပါလမ်းညွှန် [ပို ... ]
coronavirus (Kovid-19) ကိုဒေတာအရသိရသည်တက်ကြွစွာဒေတာ Worldometers.info site ၏တဦးတည်းနောက်လိုက်ဖို့, တူရကီတတိယနိုင်ငံတွေရှိရာအနေအထားကိုအမြန်ဆုံး Kovid-19 အမှုများမှာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ယနေ့ဖော်ပြထားထားသော 5,138 ဖြစ်ပွားမှုများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူပြင်သစ်တွင်ဖော်ပြထားတူရကီ, [ပို ... ]
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီး Zehra ZümrütSelçukသည်အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကဲဖြတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Coronavirus (Kovid-19) အမျိုးအစားပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှနိုင်ငံသားများအားလူမှုဖူလုံရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးကရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ [ပို ... ]
Denizli Metropolitan မြူနီစီပယ်သည် coronavirus ဆန့်ကျင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်နေရာများတွင်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပိုးသတ်ဆေးကိုဆက်လက်သန့်စင်ပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ မြို့တော် coronavirus ရုန်းကန်မှုသည်မပြတ်မတမ်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည် [ပို ... ]
Derince မြူနီစီပယ်အသင်းများမှပြုလုပ်သောပိုးသတ်ဆေးဆိုင်ရာလေ့လာမှုများကိုနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်ချက်များအတိုင်းအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ မီးဘေးနှင့် TCDD အဆောက်အအုံများသည်ပိုးသတ်ဆေးမခံရပါ။ [ပို ... ]
ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Ruhsar Pekcan သည် coronavirus အမျိုးအစားသစ် (Kovid-19) အသစ်အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်နှာဖုံးများနှင့်အသက်ရှူကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုသည့်အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာအခွန်များ၊ [ပို ... ]
IMM; ဘတ်စ်ကားများ၊ မီရိုဘတ်စ်များ၊ မီနီဘတ်စ်ကားများနှင့်ရထားလမ်းများတွင်လုံခြုံသောအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ထပ်မံလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အထွတ်အထိပ်နာရီများ၌ခရီးသည်အရေအတွက်တိုးပွားလာပြီးခရီးသည်အရေအတွက်အားနည်းစေမည်ဖြစ်သည်။ Coronavirus သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်နှင့်ကမ္ဘာကိုထိခိုက်သည် [ပို ... ]
Coronavirus (Kovid-81) ဖြစ်ပွားမှုကိုဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးအတွင်းပိုင်းပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၈၁ ခုသို့ထပ်မံပေးပို့ခဲ့သည်။ စျေးကွက်၏အလုပ်ချိန်များနှင့်စျေးဝယ်သည့်ဈေးဝယ်သူများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူမြို့ပတ်ရထားကိုစီစဉ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်တစ်မြို့လုံး [ပို ... ]
တူရကီရဲ့နိုင်ငံ Stop ပျံသန်းမှုအရေအတွက် 68 မှ Rises
၁၇.၁၀ တွင် coronavirus အမျိုးအစားသစ် (Kovid-19) ၏အစိတ်အပိုင်းအနေဖြင့်နိုင်ငံ ၄၆ ခုသို့ပျံသန်းမှုများကိုရပ်နားသွားမည်။ ထို့ကြောင့်တူရကီရပ်တန့်လေယာဉ်ခရီးစဉ် 17.00 အထိတိုးတက်လာလိမ့်မည်ဟုနိုင်ငံများတွင်အရေအတွက်က။ တူရကီနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ၎င်း၏လေယာဉ်အသွားအလာပိတ်ထားခဲ့ [ပို ... ]
ဝန်ကြီးဌာနကြေငြာခဲ့သည်! ဆံပင်ညှပ်, အလှပြင်ဆိုင်ပိတ်ပစ်
ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည် coronavirus တွင် ထပ်မံ၍ မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၈၁ သို့ထပ်မံပေးပို့ခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများသည်မြို့ပတ်ရထားနှင့်အတူတကွရှိနေခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်များစွာရှိနေခြင်း၊ ဆံပင်ညှပ်၊ [ပို ... ]
Coronavirus ဟာအီတလီမှာအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ လူသေတွေကိုတောင်ရေတွက်လို့မရတော့ဘူး
အီတလီနိုင်ငံတွင် Coronavirus သည်အိပ်မက်ဆိုးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ 'သေသောလူများကိုရေတွက်။ မရ အီတလီနိုင်ငံတွင် Coronavirus အမျိုးအစားသစ် (Kovid-19) မှသေဆုံးသွားသူများကိုအသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ ဦး ရေမှာ ၃,၄၀၅ ဦး အထိရှိခဲ့သည်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်းအီတလီနိုင်ငံမှလူပေါင်း ၄၂၇ ဦး [ပို ... ]
Sivas Yıldız Mountain Ski Centre သို့ Coronavirus Barrier ဖြစ်သည်
ကမ္ဘာတစ်လွှားအလျင်အမြန်ပျံ့နှံ့နေသော coronavirus ကြောင့် Sivas Yıldız Mountain Winter Sports Tourism စင်တာ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ Sivas Yıldızတောင်တန်းဆောင်းရာသီအားကစားခရီးသွားCenter္ဌာနအသစ် coronavirus (Kovid-19) [ပို ... ]
Coronavirus ဆန့်ကျင် Bursa Cable ကားကိုပိုးသတ်ဆေး
Limak Energy အရောင်းဌာနစင်တာများသည် Bursa ရှိUludağသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကေဘယ်ကြိုးလိုင်းနှင့်အတူ coronavirus (Kovid-19) အမျိုးအစားအသစ်ကိုကာကွယ်ရန်ပိုးသတ်ဆေးရှိသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်အရ Bursa Teleferik A. within. တွင်ကေဘယ်ကြိုးများတပ်ဆင်ထားသည်။ [ပို ... ]